Ahoana no Tena Hampahafinaritra ny Fety? | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Setswana Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Zoloa
Asio ✔ eo amin’izay zavatra tena tianao hatao rehefa misy fety.
hitady namana vaovao
hihaona amin’ny namana
TIA miaraka ny ankamaroan’ny tanora, ary tsy misy maha ratsy an’izany. Miresaka zavatra tsara momba izany mihitsy aza ny Baiboly.
Asa raha fantatrao fa...
Nifanasa ny zanak’i Joba.—Joba 1:4.
Nanatrika fampakaram-bady i Jesosy.—Jaona 2:1-11.
Niara-nikorana tany an-tranony ny Kristianina tamin’ny taonjato voalohany.—Asan’ny Apostoly 2:46, 47.
Mahafinaritra tokoa ny miaraka amin’ny namana. Mampalahelo anefa fa tsy mahasoa ny fiaraha-mikorana sasany.
TENA NISY “Voasa tamin’ny fety iray aho, ary afaka nandeha tany daholo ny rehetra. Tao an-tranon’ny ankizilahy iray ilay izy ary tsy tao ny ray aman-dreniny. Soa ihany aho fa tsy nandeha. Reko ny ampitson’iny hoe feno toaka tany ary mamo be ny olona sasany. Matin’ny toaka aza ny ankizilahy telo. Nisy niady koa tao ka tsy maintsy nofaranan’ny polisy ilay fety.”—Janelle.
LESONA Eritrereto mialoha izay hataonao. Valio ireo fanontaniana ao amin’ireo pejy manaraka, na hanasa olona ianao na hasaina. Amin’izay dia ho azo inoana kokoa hoe zavatra tsara no hotsaroanao amin’ilay fety fa tsy ratsy.
“Rehefa manao fety ny namako, dia fantatry ny mamany daholo izay misy an’ireo nasaina. Nanontaniany mihitsy aza aho rehefa nandeha naka akanjo mafana tany anaty fiara. Tafahoatra ve ny azy? Angamba. Tsy tezitra anefa aho satria hitako hoe aleo misoroka toy izay mitsabo.”—Kim.
“Betsaka ny fety mahafinaritra nalehako, ary fantatro ny nahatsara azy. Nisy ankizy sy olon-dehibe tany, sady efa nisy zavatra tsara nomanin’ny tompom-panasana ka tsy nisy nipetra-potsiny na nanao zavatra mitokana.”—Andrea.
“Misy namana tsara, fa misy kosa tia ‘manara-tsisiny.’ Tena ilaina ny mifidy tsara izay olona hasaina, raha tiana hahafinaritra ny fety iray.”
“Betsaka ny fety voalamina tsara nalehako. Narahina daholo ny fitsipika napetraka mba hisorohana olana. Milamina tsara ny saina amin’izay sady vao mainka ilay fety mahafinaritra.”
Iza avy no ho avy? Be dia be ve?
“Izay tena fantatrao ihany no tokony hasainao ary aza avela mitondra namana izy ireo.”—Renee.
“Tsy ho voafehy ny fety iray raha tsy voahaja ny isan’ny olona asainao. Efa hitako mantsy ny hoe olona 20 no asainao, nefa manasa olona 10 hafa indray ireo, dia ireo 10 ireo indray mbola manasa olon-kafa.”—Colette.
“Sarotra arahi-maso ny fety iray raha be olona loatra. Hitako hoe tsara kokoa rehefa vitsivitsy ny olona.”—Alexis.
“Ho hendry izay miaraka amin’ny hendry, fa hahita loza kosa izay minamana amin’ny tsisy saina.”—OHABOLANA 13:20
Inona no mety hitranga any?
“Ianao no ho afa-baraka raha misy zava-dratsy mitranga amin’ny fety alaminao.”—Bridget.
“Hahafinaritra ny rehetra ny fety iray raha voatandrina tsara. Ilaina fotsiny ny mieritreritra mialoha.”—Seth.
TENA NISY “Nisy namako niteny tamiko hoe tsy asainy aho rehefa manao fety izy satria fantany fa hanontanintany azy ny ray aman-dreniko, ohatra hoe iza avy no ho any na hoe hatramin’ny firy ilay izy. Tsy tiany, hono, ny hadihadina be hoatr’izany. Mampieritreritra izany! Raha tsy tiany ny hanontanintaniana dia angamba tsy tokony handeha amin’ilay fetiny aho.”—Ellen.
“Na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr’Andriamanitra ny zava-drehetra.”—1 KORINTIANINA 10:31
Ahoana raha misy zavatra tsy mampahazo aina ao amin’ilay fety?
“Izao no fanaoko: Miantso an’i Dada sy Neny aho rehefa tonga ao amin’ilay fety ary milaza amin’izy ireo hoe amin’ny firy no hody. Anontanian’izy ireo aho amin’izay hoe tsy misy olana ve. Raha mamaly aho hoe misy, dia eo ry zareo no mampahatsiahy ahy ny raharaha rehetra tokony hataoko. Vao avy mitelefaonina aho, dia teneniko ny namako hoe asain’ny ray aman-dreniko mody aloha kokoa aho ka tsy maintsy mandeha.”—Therese.
TENA NISY “Nisy ankizilahy roa nankao amin’ilay fety nalehako, nefa tsy nasaina. Malaza ho mpampiasa zava-mahadomelina ny iray taminy. Nantsoiko ny dadako ary nasaiko nalainy aho, na dia tsy mora aza ny nanao izany.”—Mary.
“Malina izay mahatsinjo ny loza ka miafina, fa ny tanora fanahy kosa mbola miroso ihany ka voa.”—OHABOLANA 22:3
Iza no hanara-maso?
“Tena azo inoana hoe hahafinaritra ilay fety raha misy olona matotra maromaro manara-maso.”—Mark.
“Tsy nahazo aina aho taloha raha miaraka amiko amin’ny fety iray ny ray aman-dreniko. Hitako anefa izao hoe ny hampizotra tsara an’ilay fety no ahatongavany eo. Tsy hoe rehefa eo ny ray aman-dreninao dia tsy ho afaka hifalifaly ianao.”—Laura.
“Manàna feon’ny fieritreretana madio.”—1 PETERA 3:16
Fety manao ahoana no nahafinaritra azy ireo, tamin’izy hoatr’anao? Misy zavatra tiany ho novana ve tamin’ireny fety nomaniny na natrehiny ireny, raha afaka namerina ny lasa izy?
MANOMANA FETY VE IANAO?
Miresaha amin’ny ray aman-dreninao ary diniho ireto:
Iza avy no hasaina?
Firy no hasaina?
Aiza ilay izy no hatao?
Iza no hanara-maso an’ilay izy?
Inona avy no hatao?
Hizara Hizara Ahoana no Tena Hampahafinaritra ny Fety?
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Desambra 2011
Hizara Hizara MIFOHAZA! Desambra 2011
MIFOHAZA! Desambra 2011